Ogaden News Agency (ONA) – Xubno ka socda Jaaliyadda Victoria iyo UHSO oo ka qaybgalay shirka HDHA
Xubno ka socda Jaaliyadda Victoria iyo UHSO oo ka qaybgalay shirka HDHA
Posted by ONA Admin	/ May 18, 2014
Xubno kasocday Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria Iyo Ururka hawenka Soomaalida Ogadenia (UHSO) ayaa waxeey ka qeyb galeen shir ey soo agaasimeen Hay’ada Daryeelkaa Haweenka Australia (HDHA).
Shirkaan ayaa looga hadlay dhibaatada dumarka kasoo jeeda wadamada ey kasocdaan dagaalada iyo sidii waxey haydahaa dumarka u qaban lahaayeen.
Labada xubin ay ka socday Haweenka Ogadenya ayaa warbixin ka jeediyeey shirkaa ku saabsaan tacadiyada dumarka Ogadenia ku haysta gudaha Ogadenia, qaxootiyada Iyo qurbaha. Waxey soo bandhigeen sawiro Iyo film ka hadlaya dumarka Ogadenia Iyo dhibaatada ey ku jiraan, tacadiyada jidh dilka, kufsiga, daryeel la’aanta, dhibaatadaas oo dowlada Ethiopia Iyo madax weyna kusheega waxay ugu yeedhaan dowlada Somalida Ethiopia ey ku hayaan. Waxey xubnaho gudbiyeen oo kale xasuuqa dhamaan ka socdaa dhulka Somaalida Ogadenia.
Codsiga labada xubin ayaa ahaa in haydaha xaquuqal insankaa ee qabilsan dumarka ey xooga saaraan siday u gargaari lahaayeen dumarka Ogadenia oo aad moodo in aduunka ey iska dhagatireen dhibatada ka heysta dowlada Ethiopia Iyo maxaysatada liyu police.
Shirkaan ayaha ahaa fursad codka dumarka dulman ee Ogadenia lagu gudbiyey, lagana filayaa in ey haydaha dumarka qabilsan ey ku daridoonaan wax-qabadkooda daryeelka dumarka Ogadenia. Shirka ayaa ku dhamaaday jawi wanagsan, qeybtisa labad shirkaan waxii ka soobaxa waan sogudbin doona.